PCB Assembly Manufacturer - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
PCB Assebmly Emeputa - PCBFuture
akwụkwọ mgbakọ sekit, prototype PCB nzukọ, PCB nzukọ Manufacturer
PCBFuture bụ ọkachamara na PCB mgbakọ emeputa. Anyị factory bụ a ukwuu ọkachamara na ahụmahụ PCB Manufacturing na PCB Assembly Services na China. Anyị nwere ike na-enye turnkey ọrụ si PCB n'ichepụta na PCB gbakọta, ule na ụlọ.
PCBFuture na-enye nzukọ PCBA. Anyị ọkachamara SMT factory nwere elu na ngwá, dị ka ụwa-klas stencil obibi, SMT mgbawa ghota na a pụrụ isi chọta, solder Reflow, online ule na ígwè ntupu n'ichepụta. Nyocha AOI na igwe nyocha X-ray maka nyocha dị mma.
Gịnị bụ prototype PCB-nzukọ?
Mgbakọ a na-ebipụta na sekit dị iche iche (PCB) nwere ọtụtụ aha. Aha ndị ọzọ ị na-anụkarị bụ: teknụzụ elu ugwu (SMT) PCB prototypes, PCBA prototype assembly, PCB sample assembly, wdg. Ndị a na-enyere aka na mmesi obi ike, na-ekwenye na enweghị nsogbu na ngwaahịa nnwale ahụ, ịchọta chinchi, na imelite imewe ahụ. A, tupu uka mmepụta, otu electronic oru ngo ga-mkpa 2-3 iterations nke a prototype PCB nzukọ iji jide n'aka na ihe niile na-arụ ọrụ nke ọma.
Kedu ihe kpatara ịhọrọ PCBFuture maka PCB andgha na nzukọ ?
Abụọ ezigbo ụlọ mmepụta ihe na Shenzhen.
Ihe ndị a pụrụ ịdabere na ya, naanị site n'aka ndị na-ekesa ikike, dịka, Akụ, Ngwa elektrọnik dị ugbu a, Digi-key, Mouser ...
A pụrụ ịdabere na PCB ibe, 15 afọ PCB ediomi, SGS ...
Assemblykpụrụ Mgbakọ a pụrụ ịdabere na ya.
One-nkwụsị ọrụ, PCB rụpụta, PCB nzukọ, akụrụngwa sourcing ...
PCBFuture na-akwado ndị injinia iji kpokọta ngwa ngwa eletriki ha ngwa ngwa ma na-eri ihe n'ụzọ dị irè n'oge usoro nyocha ọhụụ niile.
Ọrụ anyị bụ isi maka nzukọ PCB:
1. Nnyocha :zọ:
a. Na-achọpụtazi solder tapawa
b. Nyocha maka akụrụngwa ruo 0201 "
c. ihe Nlele maka ihe ndị na-efu, mmebi, akụkụ ezighi ezi, polarity
X-Ray na-enye nyocha dị elu nke:
c. ihe Ihe mgbawa mgbawa
d. Bọọdụ mbadamba
2.Elective Wave Soldering
Site na igwe ikuku na-ebugharị, PCBFuture na-enweta ogo na njikwa usoro mgbe ị na-achịkọta bọọdụ okirikiri nwere ọtụtụ ala na ike, njikọta dị ugbu a, ma ọ bụ ụdị A na-ahụkarị. A na-anwale AOI niile tupu QC.IPQC.
Ma itinye-mkpuchi na vetikal ịgba mkpuchi dị. Ikpuchido ndị na-abụghị conductive dielectric oyi akwa na-etinyere na e biri ebi circuit iba nzukọ iji chebe electronic nzukọ mmebi n'ihi mmetọ, nnu ịgba, mmiri, ero, ájá na corrosion mere site siri ike ma ọ bụ oké gburugburu. Mgbe itinye ihe mkpuchi ahụ, ọ na-ahụ nke ọma dị ka ihe doro anya ma na-egbuke egbuke.
PCBFuture niile ngwaahịa na-agbaso ụkpụrụ IPC2. Na afọ 18 nke ahụmịhe na ịtụkwasị BGA, UBGA, CSP na obere profaịlụ passives ruo na gụnyere 0201, anyị na-enye a na-eri-irè, elu-mkpụrụ ngwọta maka ihe ọ bụla SMT chọrọ.
5.Pin Site na oghere Mgbakọ
Hà ịtụkwasị teepu na teepu na-apụta. Oke PCB kachasị bụ 40 "x 40". Ọnyịnye ọsọ ọsọ ruru 15,000 iberibe kwa awa, na izi ezi ruru 99%, nke na-ebelata ọnwụ.
Enwere ụzọ abụọ maka PCBFuture. Ndu adụje ndu sọja iya l'ẹphe ha. E kewara ime ụlọ ọ bụla ụzọ 2 nọọrọ onwe ya. N'ihi ya, ọ dịghị mgbagwoju anya.
7.Ezucha igbe zuru ezu
Ngwọta 'Boxed' zuru ezu gụnyere njikwa ihe nke ihe niile, akụkụ electromechanical, plastik, casings na mpempe akwụkwọ na ihe nkwakọ ngwaahịa.
Dị ka na-eduga ika, PCBFuture na-aga ibu nnukwu na-elekọta mmadụ ọrụ na ọrụ ozi, n'ụzọ zuru ezu isonye na mba mpi, na-agbalịsi ike ịghọ ndị klas ụwa PCB.